Israsaseyn dhimasho sababtay oo ka dhacday agagaarka Villa Soomaaliya - iftineducation.com
Israsaseyn dhimasho sababtay oo ka dhacday agagaarka Villa Soomaaliya
iftineducation.com – Labo askari oo ka tirsan ciidamada dowlada Somalia ayaa maanta isku toogatay meel ku dhow xarunta madaxtooyada dowlada Somalia ee magaalada Muqdisho.
Askartan ayey dad goob joogayaal ahi sheegeen iney tacshiirad isku weydaarsadeen halka loo yaqaano xerada Caga-dhiig oo kaabiga ku heysa xarunta Villa Somalia ka dib markii uu soo kala dhex galay muran aan la ogeyn waxa uu ku saleysnaa.
Israsaaseyn ka dib labadii askari ee xabadaha isku furay ayaa goobta ku geeriyooday.
Ciidamo kale oo ku dhowaa goobta askartani isku dileen, rasaasta dhacdayna ku soo baxay ayaa meesha ka qaaday meydadka labada Askari ee is toogatay.
Ciidanka dowlada ayaa waxaa ka buuxa askar dishibiliinkooda ciidanimo uu hooseeyo, kuwaasoo marka ay murmaan iskugu jawaaba rasaas marka qaarkood ay khasaare ka soo gaarto dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
Sadax calaamadood oo ku tusinayso raga leh xubin taran oo weyn
Gabdho kaaga sheekeynaya Biyaha baxa iyo Waxa sabab u noqon kara sii aqri warbixin muhiim